ज्ञवालीलाई हटाएकोमा राप्रपाको आपत्ति ? - Everest Dainik - News from Nepal
ज्ञवालीलाई हटाएकोमा राप्रपाको आपत्ति ?
२०७३, २८ पुष बिहीबार
भक्तपुर, पुस २८ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेकोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्सेर रााणाले सरकारले आफनो लाभका निम्ति ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
भूकम्प पिडितलाई राहत दिन छोडेर सरकार सिइओ र्फर्न लागेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष राणाले राष्ट्रियता बलियो बनाउन राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच पार्टी एकीकरण भएको पनि बताए । मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउने शक्ति आवश्यक भएकाले दुई पार्टी एकीकरण गरेको उनले खुलाए ।
याे पनि पढ्नुस राणाले भने-‘राप्रपा सरकारबाट हट्दैन, एमाले र मधेसी मोर्चाको कारण चुनाव हुन सकेन’
उनले मधेशी मोर्चालाई साथमा नलिई निर्वाचनमा जानै नसकिने बताए । सरकारले चुनावको तयारी गरिरहेका बेला उनले मधेसी मोर्चालाई साथमा लिनुपर्ने बताए । राणाले यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने पनि स्पष्ट पारे।
सत्ता साझेदार राप्रपाले सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावका केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने अडान जारी राखेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सर्वोच्चको आदेश राणाको पक्षमा, थापाको टाउको दुखाई
ट्याग्स: pashupati samser rana
यी हुन् आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा गर्न नपाइने ११ गतिविधि (सूचीसहित)
दुई अर्ब घट्यो टेलिकमको आम्दानी